Jailbreak tweak Tani waxay ka hortagtaa mareegaha inay soo bandhigaan boorarka app-ka xayeysiiya | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Jailbreak tweak Tani waxay ka hortagtaa shabakadaha inay soo bandhigaan boorarka app-ka xayeysiiya
Jailbreak tweak Tani waxay ka hortagtaa shabakadaha inay soo bandhigaan boorarka app-ka xayeysiiya
Markaad ka dhex baadhayso mareegaha qaar ee Safari qalabkaaga iOS, waxa mararka qaarkood lagu soo bandhigi doonaa banner ku yaal xagga sare ee bogga kaas oo kugu boorrinaya inaad soo dejiso abka App Store ee u go'ay degelkaas.
Boorarkan waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo mareegaha iyo adeegyada inay kiciyaan soo dejinta app-ka, laakiin marka isticmaalayaashu aysan wax niyad ah u qabin inay apps dheeri ah ku soo dejiyaan iPhone ama iPad-kooda, waxay noqon karaan wax dhibaya oo waxay carqaladeeyaan khibradda isticmaale.
horumarinta iOS ginsudev ayaa dhibaatadan si toos ah wax uga qabanaysa iyada oo la adeegsanayo habayn cusub oo lacag la'aan ah oo xadhig la magac baxay SafariNoAppBanner, kaas oo sida magacu tilmaamayo, waa in ay ka hortagaan mareegaha in ay ku weydiiyaan inaad soo dejiso app (yada) App Store-ka ay u heellan yihiin marka aad ka dhex baadhayso Safari.
Iyadoo apps go'an ay inta badan ku fiican yihiin waxqabadka iyo guud ahaan waayo-aragnimada isticmaale, bogagga shabakadda ee aan ku isticmaalno Safari wali waa ku habboon yihiin haddii aadan ujeedo fog ka lahayn degelkaas gaarka ah ama haddii aad isku dayeyso inaad ilaaliso kaydinta qalabka.
Isticmaalayaashu waxay had iyo jeer iska tuuri karaan boorarka xayeysiinta app-ka si toos ah, laakiin SafariNoAppBanner ayaa si toos ah uga ilaalinaya inay meesha ka baxaan maadaama dadaalka buuggu yahay hal shay oo kale oo ay u badan tahay isticmaalayaashu ma rabaan inay dareemaan inay ku qasban yihiin inay sameeyaan marar badan.
Marka la rakibo SafariNoAppBanners ma siinayso isticmaalaha wax ikhtiyaar ah si uu u habeeyo, laakiin taasi waa in la filayaa iyada oo la adeegsanayo hal ujeedo sidan oo kale ah. Dhab ahaantii, waa wax lagu ammaano in horumariyuhu uu waxyaalaha fududaynaya oo uu dhimayo qaska abka Settings.
Kuwa xiisaynaya inay siiyaan SafariNoAppBanner cusub isku day waxay si bilaash ah ugala soo degsan karaan kaydka shakhsi ahaaneed ee ginsudev iyagoo sii maraya abka maamulaha xirmada ee ay jecel yihiin, waxaana xusid mudan inay taageerto aaladaha iOS & iPadOS 13 iyo 14 ee la xidhay.
Haddii aadan horay si buuxda uga faa'iidaysanin kaydka ginsudev, markaa waxaad ku dari kartaa maamulaha xirmada abka aad dooratay adigoo isticmaalaya URL-ka soo socda:
Ma qorsheyneysaa inaad iska tuurto boorarka xayeysiinta abka ee soo noqnoqonaya inta lagu jiro khibradaada wax raadinta ee SafariNoAppBanner? Hubi inaad noo sheegto sababta ama sababta aanad noogu sheegin qaybta faallooyinka ee hoose.
Sida Loo Dhiso Goob Istaatig Ah Oo Dhanaysa Hugo
Sida loo baadho shabakada si gaar ah Safari